Sensors yeArduino, mubatanidzwa mukuru wevashandisi veavice | Mahara emahara
Chii chinonzi Arduino?
Sensors yeArduino, mubatanidzwa mukuru wevashandisi veavice
Kushanda naArduino kunogona kuve kwakasimba uye kwakasiyana, asi kuti tiite izvi tinofanirwa kuve neruzivo rwemberi uye rwakasiyana nezve mashandiro eArduino nemidziyo yayo yakasiyana.
Imwe yemidziyo iyo inokurumidza kutanga kushandiswa ndiyo sensor. Basa reaya neArduino rinogona kukonzera mapurojekiti anonakidza, asi kwete izvo chete asi zvichatibatsira kuti tinzwisise kushanda kwebhodhi redu uye maitiro ekuvandudza mapurojekiti neFree Hardware.
1 Ndeapi maseru eArduino?
2 Ndeapi marudzi ema sensors aripo eArduino?
3 Ndinogona here kushandisa sensor kana ndiri mushandisi wekutanga?
4 Ndeapi maseru anokurudzirwa kushandisa kushandisa paArduino?
Ndeapi maseru eArduino?
Chimwe chezvinhu zvinozivikanwa uye zvinobatsira kana uchishanda neArduino Project mabhodhi ndiwo maseru. Iwo ma sensors zvinhu zvinotibvumidza isu kuti tiwedzere mashandiro ebhodhi, vanoshanda sevanozadzisa kana zvishongedzo zvinowedzerwa kune rimwe kana akawanda mahwendefa. Pari zvino, Arduino bhodhi, iri roga, haigone kutora chero ruzivo kubva kunze kana kubva kune yakatenderedza mamiriro., kunze kwekunge zvakakosha kuti iine chishandiso chitsva.
Zvikasadaro, iro chete iro ruzivo rwatinotumira kuburikidza neepanyama zviteshi pabhodhi ndiyo inogona kushandiswa Kana isu tichida kutora ruzivo kubva kunze, isu tinongofanirwa kushandisa maseru.
Gadzira dhoni inogadzirwa neArduino bhodhi uye 3D purinda
Iko hakuna generic sensor, ndokuti, kune mhando dzakawanda dzema sensors sezvo paine mhando dzeruzivo dzatinoda kutora, asi hatifanire kukanganwa kuti ruzivo urwu haruzombogadziriswa asi richava ruzivo rwekutanga. Iko kugadziriswa kwemashoko kuchaitwa naArduino kana bhodhi rakafanana iro rinoshanda sebhiriji kana midhiya interface pakati peruzivo rwakatorwa nedata rakagamuchirwa nesoftware.
Ndeapi marudzi ema sensors aripo eArduino?
Sezvatakambotaura kare, kune akawanda marudzi ema sensors eArduino. Dzinonyanya kufarirwa ma sensors ane chekuita nemamiriro ekunze, aya ndeanoti: tembiricha sensor, mwando sensor, light sensor, gasi sensor kana yemhepo yekumanikidza yekunzwa. Asi kune mamwewo mamwe ma sensors ayo ave akakurumbira nekuda kwemafoni nharembozha senge iyo chigunwe chekunzwa, iyo iris sensor kana izwi reizwi (kwete kuti uvhiringidzwe nemakrofoni).
ari thermometers Iwo ma sensors anounganidza tembiricha yekupisa iyo yakakomberedza iyo sensor, zvakakosha kuti urangarire izvi nekuti haisi tembiricha yeplate asi yeiyo sensor. Ruzivo rwunowanikwa rwunotumirwa kubhodhi reArduino uye rinotibvumidza kwete chete kushandisa gungano senge thermometer asiwo kushandisa zvirongwa zvinoita zviito zvakasiyana siyana zvichienderana nekupisa kwekunze kwechigadzirwa.
El mwando Switch Iyo inoshanda zvakada kufanana neiyo yapfuura mhando yerudzi, asi panguva ino iyo sensor inounganidza hunyoro hwakakomberedza iyo sensor uye isu tinogona kushanda nayo, kunyanya kunzvimbo dzekurima uko hunyoro hwezvirimwa zvakare musiyano wekutarisa.
El chiedza chechiedza yakasvetukira mukurumbira mushure mekushandisa kwayo pane nharembozha. Basa rakakurumbira ndere kudzima kana kuita zvimwe zviito zvichibva pachiedza chinogashira mudziyo. Panyaya yemafoni mbozhanhare, zvinoenderana nezinga rechiedza chinogamuchirwa neiyo sensor, iyo skrini yechishandiso inochinja kupenya. Tichifunga izvi, tinogona kufungidzira kuti mapurojekiti ane chekuita nenyika yekurima anofunga nezverudzi rwema sensors eArduino.
Kana tikatsvaga mudziyo wekuchengetedza, kuronga kana kungoti uwane Arduino software, sarudzo yakanaka ndeye kushandisa sensor yeminwe. Iyo sensor inotibvunza isu zvigunwe zvekuvhara kana kusabvisa kupinda. Iyo yeminwe inzwa yakave yakakurumbira kwenguva yakati, asi ichokwadi kuti kusvika parizvino hapana mamwe akawanda mabasa kunze kwekuvhurwa kwezvinhu.
Izwi rezwi rinotarisanawo nenyika yekuchengeteka kunyangwe mune ino kesi inogona kutorwa zviri nyore kune dzimwe nyika senge nyika yeAI kana vabatsiri vezwi. Nekudaro, nekuda kwenzwi renzwi, mutauri akangwara anokwanisa kucherechedza ruzha uye kusiyanisa akasiyana mabasa kana mhando dzevashandisi zvichibva nezwi rezwi ratinobatanidza. Zvinosuruvarisa kuti iyo yekunzwa minwe uye izwi rezwi anonyanya kudhura maseru uye anonetsa kuwana uye kushanda nawo, zvirinani kune vashoma vevashandisi vashandisi vanoshanda naArduino.
Ndinogona here kushandisa sensor kana ndiri mushandisi wekutanga?
Mubvunzo wemamirioni emadhora kune vaverengi vazhinji veichi chinyorwa ndechekuti zvinoita here kana kuti kwete kushandisa ma sensors ane ruzivo rwakaderera. Mhinduro ndeyokuti hungu. Zvakawedzera, manongedzo mazhinji anokurudzira nekukurumidza kushandisa maseru neArduino, kuitira kuti uwedzere kudzidza kwako.
Iwe unowanzo dzidza kushandisa mwenje dze LED kutanga, chirongwa chinokurumidza uye chiri nyore kudzidza. Gare gare, iyo yekushisa sensor kana humidity sensor yakatanga kushandiswa, nyore kushandisa maseru, ari nyore kuwana uye vane akawanda mapurojekiti anobatsira kudzidza mashandisiro emhando idzi dzemidziyo.
Ndeapi maseru anokurudzirwa kushandisa kushandisa paArduino?
Kune akawanda marudzi ema sensors uye yega yega zvinogadzirwa nemhando dzakasiyana, saka huwandu hwema sensors hwanyanya kwazvo. Kana isu tichida kugadzira purojekiti ine imwechete sensor kana nema sensors akati wandei, kutanga isu tinofanirwa kusarudza kuti chirongwa ichi chichava nehupenyu hupi. Kana tichizogadzira imwechete unit ine prototype, zvakanakisa kusarudza kushandisa maseru-emhando yepamusoro, kuti ruzivo urwu ruve rwechokwadi sezvinobvira.
Kana pane zvinopesana isu tichida gadzira purojekiti inozopindurwazve zvine mutsindo, kutanga ini ndinokurudzira kushandisa yakachipa pashiri sensor yatinogona kuwanaGare gare, patinoongorora kuti inoshanda, ipapo isu tichayedza akati wandei emasaenzi ane zvakafanana basa. Gare gare, kana isu tadzora yakawanda pamusoro pemaseru, isu tichava tatoziva ndeipi modhi kana rudzi rweiyo sensor yekushandisa patinenge tichizogadzira chirongwa chitsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Sensors yeArduino, mubatanidzwa mukuru wevashandisi veavice
Ruzivo rwakanakisa, ndiani wenyu angabvunza imwe chaiyo?
Pindura kuna Raymundo
3 mapurojekiti ane RGB Led uye Arduino
Tembiricha yekupisa yeArduino
Tora zvinyorwa zvazvino pamusoro peHardware.